Tag: kutsvaga kwemukati | Martech Zone
Tag: kutsvaga kwemukati
Takasaina Hotjar uye takaita yekuyedza meepu pane peji redu. Iyo peji rakaringana repamba rine yakawanda zvikamu, zvinhu, uye ruzivo. Chinangwa chedu hachisi chekukanganisa vanhu - ndechokupa peji rakarongeka apo vashanyi vanogona kuwana chero chavari kutsvaga. Asi ivo havasi kuiwana! Tinoziva sei? Kupfuura makumi maviri muzana ezvese zvinoitika pamapeji edu epamba zvinobva kubhawa redu rekutsvaga. Uye mukuongorora iyo
Algolia: Yemukati Realtime Tsvaga seSevhisi
Muvhuro, Kukadzi 17, 2014 Douglas Karr
Kuvaka ako emukati ekutsvaga kugona kwakapfuma, chaiyo-nguva, uye nekukurumidza chirongwa chakakura. Wedzera kwazviri kutsvagisa nzvimbo, mifananidzo, zvekutengeserana uye nhare uye uri kunyatso kugadzira chikuva chese. Isu tanga tichingotaura kumugadziri mangwanani ano nezve kugona kwavo kwekutsvaga uye kuti chinhu chinoda kuwedzererwa pane yavo saiti. Hapana chikonzero chekukudziridza chako - Algolia ibasa rakazara rekutsvaga, rinowanikwa seREST